Meeraha Saturn: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato | Saadaasha Shabakadda
Maanta waxaan u laabaneynaa cilmiga xiddigiska. Kadib markaan falanqeeyay sifooyinka noo nidaamka qoraxdaWaxaan ku bilawnay anagoo mid mid u sharaxeyna meerayaasha oo dhan. Waan aragnay taas Mercury waxay ahayd meeraha ugu dhow cadceedda, Jupiter kan ugu weyn nidaamka qoraxda iyo Marte waxay ku jiri kartaa nolol. Maanta waxaan diirada saari doonaa Meeraha Dunida. Mid ka mid ah labada meere ee ugu waaweyn uguna caansan giraanta asteroid-ka. Waa meeraha si fudud looga daawan karo Dhulka.
Ma rabtaa inaad ogaato dhammaan qarsoodiga Saturn? Sii wad akhriska oo soo ogow.
2 Waa maxay gudaha iyo jawiga Saturn?
3 Dayax iyo dayax gacmeedyo
4 U fiirsashada dhulka
Saturn waa meeraha gaarka ah. Saynisyahanada waxaa loo tixgeliyaa inay tahay mid ka mid ah meerayaasha ugu xiisaha badan inay ogaadaan dhammaan nidaamka qorraxda. Waxay muujineysaa inay leedahay cufnaan aad uga hooseysa tan biyaha waxayna ka kooban tahay gebi ahaanba haydarojiin, oo leh helium yar iyo methane.
Waxay ka tirsan tahay qaybta gaaska weyn waxayna leedahay midab gaar ah oo ka dhigaya inay ka soo baxdo inta kale. Waa xoogaa jaalle ah dhexdoodana kooxo yaryar oo midabbo kale leh ayaa la isku daraa. Kuwo badan ayaa ku qalda Jupiter laakiin iyagu haba yaraatee iskuma xirna. Waxay si cad u kala soocaan giraanta. Saynisyahannadu waxay qiyaasayaan in siddooyinkoodu ka samaysan yihiin biyo, laakiin u adag sida barafka, buuraha barafka ama kubbadaha barafka qaarkood oo ay weheliso nooc ka mid ah boodhka kiimikada gaar ahaan.
Horeba 1610 dabaysha ku xeeran meeraha Saturn ayaa la ogaaday mahadsanid Galileo iyo telescope-ka. Raadintaas waxaa lagu ogaaday in dabaysha ku hareeraysan hareerahooda ay ku sameeyaan xawaare aan la qiyaasi karin sida ay u kala dhaqso badan yihiin. Waxa ugu muhiimsan ee intaas oo dhan iyo naxdin ku ah kuwa garanaya, ayaa ah inay ku dhacdo oo keliya dhulbaraha meeraha.
Waa maxay gudaha iyo jawiga Saturn?
Si ka duwan meerayaasha kale ee ku shaqeeya nidaamka qorraxda, cufnaanta Saturn way ka yar tahay tan biyaha ku jirta meeraheenna. Qaab-dhismeedku wuxuu ka kooban yahay gebi ahaanba haydrogen. Bartamaha meeraha jiritaankiisa dhowr waxyaalood oo aasaasi ah ayaa laga xaqiijin karaa. Kuwani waa cunsurro culus oo sameeya qaabdhismeedyo adag oo meeraha uu ka kooban yahay maadaama ay ka dhigayso koox yar oo dhagaxyo ah inay is qabsadaan ama ay ku dhex samaysmaan dhagaxyo googo 'ah. Dhagaxyadaas waxay gaari karaan heer kulka illaa 15.000 digrii.
Si wada jir ah ula Jupiter waxaa loo arkaa ma aha oo kaliya labada meerayaasha ugu waaweyn ee nidaamka qoraxda, laakiin sidoo kale ugu kulul.
Marka laga hadlayo jawigeeda, waxay ka kooban tahay haydarojiin. Waxaa jira cunsurro kale oo ay ka kooban tahay oo ay lagama maarmaan tahay in la ogaado sida ugu macquulsan dhammaan walxaha suurtogalka ah si loo ogaado astaamaha ay meeraha ku yeelan karto guud ahaan.
Qaybaha intiisa kale waxay leeyihiin qadar yar. Waxay ku saabsan tahay methane iyo ammonia. Waxa kale oo jira qaddarro kale oo gaasas ah oo soo dhex gala iyada oo lala kaashanayo waxyaalaha ugu muhiimsan sida ethanol, acetylene iyo phosphine. Kuwani waa gaasaska kaliya ee ay awoodaan in ay darsaan cilmiga fiisigiska, in kasta oo la ogyahay in ayna ahayn curiyaha kaliya.
Giraanta Saturn waxay ku fidsan tahay diyaaradda dhulbaraha meeraha laga bilaabo 6630 km illaa 120 km oo ka sarreysa dhulbaraha Saturn waxayna ka kooban yihiin jajabyo leh biyo baraf badan. Cabbirka mid kasta oo ka mid ah jajabku wuxuu u dhexeeyaa walxaha siigada yar yar ku dhaca ilaa dhagaxyada dhawr mitir oo cabir ah. Albedo sare ee siddooyinku waxay muujinayaan inay ku yar yihiin taariikhda nidaamka qorraxda.
Dayax iyo dayax gacmeedyo
Waxaa ka mid ah astaamahan soo jiidashada leh ee Saturn ka dhigaya meeraha xiisaha leh in la ogaado, waa inaan sidoo kale iftiimino dayax gacmeedyada ay ka kooban tahay. Illaa iyo hadda 18 dayax gacmeed ayaa la aqoonsaday oo ay magacaabeen khubaro ku takhasustay cilmiga fiisigiska berrinka. Tani waxay siineysaa meeraha ahmiyad weyn iyo u adeegsi. Si aan sifiican iyaga u garano, waxaan magacooda ku sheegaynaa qaar ka mid ah.
Kuwa ugu caansan waa waxa loogu yeero Hyperion iyo Iapetus, kuwaas oo gebi ahaanba ka kooban biyo dhexdooda laakiin aad u adag oo loo malaynayo in aasaas ahaan la qaboojiyey ama qaab baraf siday u kala horreeyaan.
Saturn waxay leedahay labada dayax gacmeed iyo dibedba. Gudaha waxaa ka mid ah kuwa ugu muhiimsan oo ay ku jiraan wareegga loo yaqaan titan. Waa mid ka mid ah dayax-gacmeedyada ugu waaweyn ee loo yaqaan 'Saturn', in kasta oo aan si fudud loo arki karin maadaama ay ku wareegsan tahay ceeryaan cufan oo cufan. Titan waa mid ka mid ah dayaxyada asal ahaan ka kooban ku dhowaad gebi ahaanba nitrogen.
Gudaha Dayaxani wuxuu ka kooban yahay dhagaxyada kaarboon hydroxide, methane ka mid ah walxaha kale ee kiimikada ee la midka ah meeraha guud sida ay tahay. Tiradu badanaa waa isku mid waxayna ugu badnaan dhihi doonaan, xitaa isku cabirro isku mid ah.
U fiirsashada dhulka
Sidaan horay u sheegnay, waa meeraha si fudud looga daawan karo dhulkeenna. Waxaa laga arki karaa cirka inta badan nooc kasta oo ah telescope hiwaayadeed. U fiirsashadeedu waxay ugu fiican tahay marka meeraha dhow yahay ama ka soo horjeedaan, taasi waa, booska meeraha markii uu dhererkiisu yahay 180 °, sidaa darteed waxay u muuqataa ka soo horjeedka Qorraxda cirka.
Waxaa si qumman looga arki karaa cirka habeenka sida barta iftiinka aan dhalaalin. Waa dhalaal iyo jaale iyo waxay qaadataa ku dhowaad 29 sano iyo badh in lagu dhammaystiro hal kacaan turjumaad buuxda oo ku wareegsan iyadoo la tixgelinayo xiddigaha asalka ah ee ka tirsan nuxurka. Kuwa doonaya inay kala soocaan siddooyinka Saturn, waxay u baahan doonaan telescope ugu yaraan 20x ah si si muuqata loogu arki karo.
Sida ay wax uga arkeen hawada sare, seddex dayax gacmeed Mareykan ah ayaa u safray si ay u arkaan banaanka iyo jawiga Saturn. Maraakiibta ayaa loo yeeray Pioneer 11 baaris iyo Voyager 1 iyo 2. Dayax gacmeedkan ayaa dul maray meeraha 1979, 1980 iyo 1981, siday u kala horreeyaan. Si ay u helaan macluumaad sax ah oo tayo leh, waxay qaateen qalab lagu falanqeynayo xoojinta iyo kala-soocidda shucaaca ee muuqaalka, ultraviolet, infrared iyo radio wave spectrum.
Waxay sidoo kale ku qalabaysan yihiin qalab loogu talagalay barashada aagagga magnetka iyo soo ogaanshaha walxaha la soo eedeeyay iyo miraha boodhka.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad sifiican ugubaraneyso meeraha Saturn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Astronomy » Meeraha Saturn
Mesozoic era: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato